Sarefat Kunafo no Nyaa Ne Gyidi So Akatua | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
TWA ho mfonini hwɛ. Okunafo hiani bi reyɛ ne ba atuu. Odi abofra no bakoro. Ne ho adwiriw no papa. Ɛnkyɛe koraa, na ne ba yi bɔ ne bo a nkwa biara nni ne mu, nanso odiyifo no anyan abofra no. Abofra no reserew, na ɔbea no hwɛ no a, na n’ani agye kwa. Ne hɔho no ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, wo ba no te ase.”
Bɛyɛ mfe 3,000 ni a owusɔre yi sii. Wubetumi akenkan ho asɛm wɔ 1 Ahene ti 17. Ɔhɔho no ne Onyankopɔn diyifo Elia. Hena ne abofra no maame? Bible nhyɛ da mmɔ ne din; nea ɛka ne sɛ ɔyɛ ɔbea kunafo a ɔte Sarefat. Sɛ ade biako bi wɔ hɔ a yebetumi aka sɛ ɛhyɛɛ ɔbea no gyidi den paa a, na ɛyɛ ne ba no a odiyifo no nyan no no. Yɛrebɛhwɛ ne ho asɛm kakra na yɛahwɛ nea yebetumi asua afi mu.
ELIA HUU ƆBEA KUNAFO BI A NE GYIDI SO
Bere a ɔhemmɔne Ahab redi Israel so no, Yehowa kae sɛ ɔpɛ kataban besi asase no so bere tenten. Bere a Elia kae sɛ ɔpɛ besi no, Onyankopɔn de no siei na Ahab anhu no; ɔmaa nkwaakwaadabi brɛɛ no aduan ne nam. Afei Yehowa ka kyerɛɛ Elia sɛ: “Sɔre kɔ Sarefat a ɛwɔ Sidonfo asase so na kɔtena hɔ. Hwɛ! mɛma ɔbea bi a ɔyɛ okunafo ama wo aduan wɔ hɔ.”—1 Ahe. 17:1-9.
Bere a Elia koduu Sarefat no, ohui sɛ okunafo hiani bi repɛ nnyina. Ɔbea yi na ɔbɛma odiyifo no aduan anaa? Ɔbea hianiwa yi deɛ, dɛn na ɔwɔ a obenya bi ama no? Sɛ na Elia tirim nteɛ no mpo a, ofii ase ne ɔbea no bɔɔ nkɔmmɔ. Ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Mesrɛ wo, fa nsu kakra gu ade mu ma me, na mennom.” Afei bere a ɔyɛe sɛ ɔrekɔfa nsu no aba no, Elia san frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, ɛyɛ a fa paanoo kakra hyɛ wo nsam brɛ me.” (1 Ahe. 17:10, 11) Nsu deɛ na okunafo no benya bi ama no, nanso paanoo deɛ ɔrekɔfa wɔ he?
Ɔbea no kae sɛ: “Sɛ́ Yehowa, wo Nyankopɔn no te ase yi, minni paanoo biara; esiam nsa mã pɛ na aka wɔ kuku mu ne ngo kakraa bi a ɛwɔ ahina mu, na merepɛ nnyina kakra akɔyɛ biribi ama me ne me ba adi, na yɛawu.” (1 Ahe. 17:12) Ma yensusuw asɛm yi ho kakra.
Okunafo no hui sɛ Elia yɛ Israelni a ɔsom Onyankopɔn. Yebetumi aka saa efisɛ ɔbea no kae sɛ: “Sɛ́ Yehowa, wo Nyankopɔn no te ase yi.” Sɛ yɛhwɛ a yebetumi aka sɛ na ɔbea no wɔ Israelfo Nyankopɔn no ho nimdeɛ kakra, nanso na ennuu baabi a ɔbɛfrɛ Yehowa sɛ “me Nyankopɔn.” Ná ɔte Sarefat a ɛbɛn Foinikefo kurow Sidon. Ɛbɛyɛ sɛ na Sarefatfo som Baal, nanso Yehowa huu biribi titiriw bi wɔ okunafo no ho.
Ɛwom sɛ na Sarefat kunafo no te abosonsomfo mu deɛ, nanso onyaa Yehowa mu gyidi. Bere a Yehowa somaa Elia kɔɔ ɔbea no nkyɛn no, ɛboaa ɔbea no ne Elia nyinaa. Yebetumi asua biribi titiriw afi asɛm yi mu.
Ɛnyɛ Baal asomfo a wɔwɔ Sarefat no nyinaa na na wɔn suban asɛe koraa. Bere a Yehowa somaa Elia kɔɔ ɔbea no nkyɛn no, na ɔreda no adi sɛ, sɛ obi nnya mmɛsom no mpo na ɔwɔ adwempa a, otumi hu. Nokwasɛm ni, “ɔman biara mu no, onipa a osuro [Onyankopɔn] na ɔyɛ adetrenee no, ogye no tom.”—Aso. 10:35.
Nnipa bi te w’asasesin mu a wɔte sɛ okunafo a ɔwɔ Sarefat no anaa? Ebia baabi a wɔte no, atoro som mufo nko ara, nanso ebetumi aba sɛ wɔrepɛ biribi ahu. Ebia wonni Yehowa ho nimdeɛ ahe biara enti sɛ obi ammoa wɔn a, ɛbɛyɛ den sɛ wobehu nokware som. Worehwehwɛ saafo no aboa wɔn anaa?
‘DI KAN YƐ PAANOO KETEWAA BI BRƐ ME’
Wo deɛ, susuw asɛm a Elia ka kyerɛɛ okunafo no ho hwɛ. Na ɔbea no aka akyerɛ no sɛ aka aduan kakra a ɔne ne ba bedi na afei wɔawu. Nanso dɛn na Elia kae? Ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Nsuro. Wo de, kɔyɛ nea woaka no. Mmom di kan fa nea ɛwɔ hɔ no bi yɛ paanoo ketewaa bi brɛ me ansa na woayɛ bi ama wo ne wo ba no. Na asɛm a Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Esiam a ɛwɔ kuku mu no rensã, na ngo a ɛwɔ ahina mu no nso rensã kosi da a Yehowa bɛma osu atɔ agu asase no so.’”—1 Ahe. 17:11-14.
Ebia obi bɛka sɛ, ‘Owura yi paa, dɛn na worepɛ akyerɛ? Yɛmfa aduan kakra a aka yi mma wo?’ Nanso ɛnyɛ saa na okunafo yi yɛe. Ɛwom, na onni Yehowa ho nimdeɛ ahe biara nanso ogyee Elia dii, na ɔyɛɛ nea ɔkae no. Ná eyi gye gyidi paa, na wannu ne ho sɛ ɔyɛɛ saa. Adɛn ntia?
Okunafo no gyee Elia Nyankopɔn dii, na Yehowa gyee ɔne ne ba no nkwa
Onyankopɔn werɛ amfi okunafo hiani no. Sɛnea Elia kae no, Yehowa amma okunafo no ne ne ba no ne Elia ano aduan ammɔ wɔn kosii sɛ ɔpɛ no twaam. Ampa ara “kuku no mu esiam no ansa, na ahina no mu ngo no nso ansa, sɛnea Yehowa nam Elia so kae no.” (1 Ahe. 17:16; 18:1) Sɛ ɔbea no anyɛ nea Elia kae no a, ebia anka esiam ne ngo kakra a ɔwɔ no ara ne aduan a obedi na wawu. Nanso ogyee Elia asɛm no dii na ɔde ne werɛ hyɛɛ Yehowa mu, na odii kan maa Elia aduan ansa na ɔredi bi.
Ade biako a yebetumi asua afi asɛm yi mu ne sɛ Onyankopɔn hyira wɔn a wogye no di. Sɛ wuhyia sɔhwɛ anaa amanehunu bi na wode wo werɛ hyɛ Yehowa mu a, ɔbɛboa wo. Yehowa yɛ adamfo a ɔbɛma wo nea wuhia na wabɔ wo ho ban na woatumi agyina sɔhwɛ ano.—Ex. 3:13-15.
Afe 1898 mu no, Zion’s Watch Tower no kaa biribi faa okunafo yi asɛm no ho: “Sɛ ɔbea no yɛ osetie de kyerɛ sɛ ɔwɔ gyidi a, ɛnde Awurade bebu no sɛ obi a ɛsɛ sɛ ɔma Odiyifo no boa no; nanso sɛ wannye asɛm no anni a, anka ebia Odiyifo no benya okunafo foforo a obegye asɛm no adi. Eyi fa yɛn nso yɛn ho. Ɛwɔ hɔ wɔ hɔ a, Awurade sɔ yɛn gyidi hwɛ. Sɛ yɛkyerɛ sɛ yɛwɔ gyidi a, yebenya nhyira; sɛ nso yɛankyerɛ gyidi a, yɛrennya nhyira.”
Sɛ sɔhwɛ bi to yɛn a, ehia sɛ yɛma Yehowa kyerɛ yɛn nea yɛnyɛ, na yebehu eyi wɔ Kyerɛwnsɛm no ne asafo nhoma ahorow mu. Afei sɛ yehu Yehowa adwene wɔ asɛm no ho a, ɛsɛ sɛ yegye tom ntɛm. Sɛ ɛyɛ den oo, sɛ ɛnyɛ den oo, ɛsɛ sɛ yegye tom. Abebusɛm bi ka sɛ: “Fa wo koma nyinaa to Yehowa so, na mfa wo ho ntweri w’ankasa ntease. Hu no w’akwan nyinaa mu, na ɔno na ɔbɛma w’akwan ateɛ.” (Mmeb. 3:5, 6) Sɛ yɛde saa abebusɛm no yɛ adwuma a, nhyira deɛ yɛfa no kwa.
‘WOABA HA SƐ WOREBEKUM ME BA?’
Na biribi foforo wɔ hɔ a ɛbɛsɔ okunafo no gyidi ahwɛ. Bible ka sɛ: “Nsɛm yi akyi no, ɔbea no, kyerɛ sɛ, ofiewura no, babarima yaree, na yare no mu yɛɛ den kosii sɛ afei de na ahome biara nni ne mu bio.” Ná awerɛhow amene okunafo no, na na nea asi no nsen ne tirim. Enti obisaa Elia sɛ: “O nokware Nyankopɔn nipa, dɛn na me ne wo wɔ yɛ? Woaba ha sɛ worebɛkae me me bɔne na woakum me ba?” (1 Ahe. 17:17, 18) Dɛn na ɛmaa ɔbea yi kaa asɛm yayaayaw saa?
Ɔbea no kaee bɔne bi a wayɛ a ɛreteetee n’ahonim anaa? Onyaa adwene sɛ Onyankopɔn na asoma Elia aba hɔ sɛ ommekum ne ba no mfa ntua ne bɔne so ka anaa? Bible nka nkyerɛ yɛn, nanso yenim ade biako bi: Okunafo no ammɔ Onyankopɔn sobo biara.
Yebetumi aka sɛ bere a okunafo no ba no wui no, ɛhaw Elia paa. Ebia nea ɛsɛee asɛm no koraa ne sɛ na okunafo no susuw sɛ ɔno na waba hɔ abekum abofra no. Enti Elia faa abofra a wawu no de no kɔɔ atifi dan no mu na ɔteɛɛm sɛ: “O Yehowa, me Nyankopɔn, okunafo a mabɛsoɛ no yi, woreyɛ ɔno nso bɔne akum ne ba?” Sɛ Onyankopɔn ma kwan ma ɔbea yamyefo yi hu amane bio a, anka ahohorabɔ a ɛbɛba ne din so deɛ yɛnka. Eyi ne ade a na ɛhaw Elia paa. Enti ɔsrɛɛ Yehowa sɛ: “O Yehowa, me Nyankopɔn, mesrɛ wo, ma abofra yi kra nsan mmra ne mu.”—1 Ahe. 17:20, 21.
“HWƐ, WO BA NO TE ASE”
Eyi nyinaa na Yehowa retie. Ná okunafo no ahwɛ odiyifo no, na asɛm a ɔka kyerɛɛ no nso ogye dii. Nanso Onyankopɔn amfa ne ho annye asɛm no mu, enti abofra no wui. Ebia nea enti a wamfa ne ho annye mu ne sɛ na onim sɛ obenyan abofra no, na ɛno bɛma nkyirimma anya anidaso sɛ owusɔre bɛba daakye. (Eyi ne owusɔre a edi kan wɔ Bible mu.) Bere a Elia srɛɛ Yehowa no, ɔsan maa abofra no baa nkwa mu. Enti ɔde abofra no maa ne maame kae sɛ: “Hwɛ, wo ba no te ase”! Anigye a okunafo no benya deɛ, yɛrentumi mfa yɛn ani mmu mpo na yɛaka ho asɛm. Ɔbea no ka kyerɛɛ Elia sɛ: “Afei na mahu sɛ woyɛ Onyankopɔn nipa ampa, na Yehowa asɛm a ɛwɔ w’anom no yɛ nokware.”—1 Ahe. 17:22-24.
Ahene Nhoma a Edi Kan ti 17 nka ɔbea no ho asɛm biara bio. Nanso nea Yesu ka faa ɔbea yi ho kyerɛ sɛ ebia ɔde ne nkwa nna a aka som Yehowa. (Luka 4:25, 26) Ɔbea no asɛm ma yehu sɛ obiara a obeyi ne yam aboa Onyankopɔn asomfo no, ɔno nso behwie ne nhyira agu ne so. (Mat. 25:34-40) Bio, asɛm yi ma yehu sɛ Onyankopɔn hwɛ n’asomfo; sɛ ɛyere sɛ dɛn mpo a, ɔbɛhwɛ wɔn. (Mat. 6:25-34) Afei nso, ɛma yehu sɛ Yehowa wɔ tumi a ɔde benyan awufo, na ne ho pere no mpo sɛ ɔbɛyɛ saa. (Aso. 24:15) Eyi nyinaa nti momma yɛnkae okunafo a ofi Sarefat no daa.